थोमस संकरा - विकिपिडिया
थोमस संकरा ( फ्रान्सेली उच्चारण: [tɔma sɑ̃kaʁa] ; २१ डिसेम्बर १९४९ -१५ अक्टोबर १९८७ ) एक बुर्किना फासो सामाजिक न्याय अभियानकर्ता र १९८३ देखि १९८७ सम्म बुर्किना फासो का राष्ट्रपति थिए। मार्क्सवादी – लेनिनवादी र पान अफ्रिकीवादी रहेका उनलाई उनका समर्थकहरूले करिश्माई र क्रान्तिको प्रतिष्ठित व्यक्तित्वका रूपमा हेर्थे र कहिलेकाँही "अफ्रिकाका चे ग्वेभारा " भनेर चिनिन्छन्। 
पहिलो बुर्किना फासो का राष्ट्रपति
पाँचौ अप्पर भोल्टा को प्राधानमन्त्री
(१९४९-१२-२१)२१ डिसेम्बर १९४९
१५ अक्टोबर १९८७(१९८७-१०-१५) (३७ वर्ष)
ऊगादोगो, Burkina Faso
१ राष्ट्रपति पद
१.१ आत्मनिर्भरता सिर्जना
१.२ स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक कार्यहरू
१.३ मोसी मानिससँग सम्बन्ध
१.४ महिला अधिकार
२ व्यक्तिगत छवि र लोकप्रियता
ब्लेज कम्पाउरीले गरेको "कु"बाट ४ अगस्त १९८३ मा ३३ वर्षको उमेरमा संकारा राष्ट्रपति बने। यो विद्रोहलाई लिबियाले सहयोग गरेको थियो, जुन त्यस समय चाडमा फ्रान्ससँग युद्धको बिन्दुमा थियो।
स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक कार्यहरूसम्पादन
मोसी मानिससँग सम्बन्धसम्पादन
व्यक्तिगत छवि र लोकप्रियतासम्पादन
सन् १९८४-१९८७ मा संकरा को कालमा बुर्किना फासो को निसान छाप , एक पार पारिएको म्याटॉक र एके-47 ( हसिया हथौड़ा सङ्केत) ला पट्री औ ला मोर्ट, न्युस भाइनक्रोन (अंग्रेजी: "फादरल्याण्ड वा मृत्यु, हामी जित्नेछौं ")। मोट्टक र एके 47 47 को मोजाम्बिकको हतियारको कोटमा पनि चित्रित छ, जबकि हतियारमुनि रहेको आदर्श वाक्य पनि क्युबाको हालको आदर्श वाक्य हो, यद्यपि स्पेनिशमा।
उनले मर्सिडीज कारको सरकारी बेचे बेचे र रेनॉल्ट (बुर्किना फासोमा त्यतिबेला बिक्री भएको सबैभन्दा सस्तो कार) मन्त्रीहरूको आधिकारिक सेवा कार बनाए।
उनले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब घटाए (उनको आफ्नै सहित) र सरकारी चाफर्स र प्रथम श्रेणी एयरलाइन टिकटको प्रयोग गर्न निषेध गरे।
उनले सामन्ती जमिन्दारहरूबाट किसानहरूलाई जग्गा पुन: वितरण गरे। गहुँ उत्पादन १,७०० किलोग्राम प्रति हेक्टर (१,५०० पाउन्ड/एकड)बाट बढेर ३,८०० किलोग्राम प्रति हेक्टर (३,४०० पाउन्ड/एकड) ,जसबाट देश खाद्यान्न मा आत्मनिर्भर बन्यो। 
उनले वैदेशिक सहायताको विरोध गर्दै भने, "जसले तपाईँलाई खुवाउँछ, उसले तपाईँलाई नियन्त्रण गर्दछ"।
उनले अफ्रिकी सङ्घको सङ्गठन जस्ता फोरममा बोले जुन उनले पश्चिमी व्यापार र वित्तको माध्यमबाट अफ्रिकाको नव-उपनिवेशवादी प्रवेशको रूपमा वर्णन गरे।
उनले अफ्रिकी देशहरूको संयुक्त मोर्चालाई वैदेशिक ऋण अस्वीकार गर्न आग्रह गरे। उनले तर्क दिए कि गरिब र शोषितलाई धनी र शोषणकारीको ऋण तिर्न कुनै बाध्यता छैन।
ऊगादोगो मा, संकराले सेनाको प्रोभिजनिङ स्टोर राज्य को स्वामित्वको सुपरमार्केटमा रूपान्तरण गरे जुन सबैको लागि खुल्ला (देशको पहिलो सुपरमार्केट) थियो । 
उनले सार्वजनिक क्षेत्रका राम्रो तलब सुबिधा भएका सरकारी कर्मचारीहरूलाई एक महिनाको तलब सार्वजनिक परियोजनाको लागि भुक्तान गर्न बाध्य तुल्याए।
उनले आफ्नो अफिसमा ए.सि. (वातानुकूलन) प्रयोग गर्न अस्वीकार गरे कि त्यस्ता विलासिता अरू कसैलाई उपलब्ध थिएन तर मुठीभर बुर्किनाबहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ ।
राष्ट्रपतिको हैसियतमा उनले आफ्नो तलब एक महिनाको $४५० डलरमा झारे र उसको सम्पत्ति कार, चार बाइक, तीन गितार, फ्रिजमा सीमित गरे।
उनको हत्याको २० वर्ष पछि, संकरालाई १५ अक्टोबर २००७ मा बुर्किना फासो, माली, सेनेगल, नाइजर, तन्जानिया, बुरुन्डी, फ्रान्स, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सम्पन्न समारोहहरूमा स्मरण गरियो।
↑ १.० १.१ १.२ Burkina Faso Salutes "Africa's Che" Thomas Sankara by Mathieu Bonkoungou, Reuters, 17 October 2007.
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=थोमस_संकरा&oldid=929016" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २१ सेप्टेम्बर २०२०, २१:०२
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २१:०२, २१ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।